Vanhu vakawanda vane matenda eHigh Blood Pressure neshuga vari kutadza kuongororwa hutano hwavo pachine nguva zvichikonzerwa nekushaya kwemari yekuAmerica yokuti vaende vavhenekwe hutano hwavo.
Mumwe wevakavhiringidzwa hutano hwavo ndiMuzvare Tabeth Bhobho, avo vanogara kuRutendo Township kuKwekwe.
Muzvare Bhobho vakaoma mutezo vari pabasa kuNamibia, vakatozodzoka kumusha makore maviri apfuura vari pawheelchair.
Vanoti havana kumbofungidzira kuti kutemwa kwavakaitwa nemusoro kwemazuva maviri, ndiwo waiva munongedzo wechirwere ichi.
Muzvare Bhobho vanoti dambudziko guru ravakasangana naro vadzoka kumusha, ndere kushaya mari yekuAmerica yokuti vanoona nyanzvi dzehutano dzinonzi ma physiotherapists ayo anokwanisa kubatsira kufambisa mitezo yemunhu.
Mumwe mudzimai akasanganawo nedambudziko iri, ndiAmai Annastasia Mukuze, vanogara kuVainona. Amai Mukuze vanoti vakavhiringidzwa hutano hwavo mugore ra2015, mushure mokunge vatemwawo nemusoro asi vakaita rombo rakanaka rokubatsirwa nenyanzvi dzakasiyana siyana kusvikira vave kukwanisa kufamba nemadondoro.
Mumwe chiremba anoona nezvekufamba kwemitezo, Dr Helkias Mbiru Mapimhidze, vanoti zvakakosha kuti munhu wese anenge aoma mutezo abatsirwe nokukurumidza nokuti akanonokerwa anogona kutoremara zvachose.
Dr Mapimhidze vanoti vakadzi ndivo vanonyanya kukurumidza kupora kudarika varume.
Mumwe chiremba Dr Josephat Chiripanyanga vanoti vanhu vese vanofanira kugara vachivhenekwa kuzvipatara kuti vaongororwe uye vanenge vachinwa mishonga vatevedzere zvinenge zvataurwa navanachiremba.
Dr Chiripanyanga vanoti vamwe vane mitezo yakakuvara vanokwanisa kutadza kutaura nokuti miromo yavo inenge yaenda parutivi zvokuti vanenge vave kutozodzidziswa kutaura sezvinoitwa vana vadiki.
Ongororo yakaitwa naMuzvinafundo Andrew Matenga muna 2012 na 2013 yakaratidzawo kuti vezera rechidiki vari kubatwawo nedenda iri.
Muzvinafundo Matenga vanoti mari yokurapa vanhu vakaoma mitezo yakawandisa nokuti zvipatara zvehurumende hazvina zvekushandisa zvakakwana zvinozopa kuti vanhu vaende kunotsvaga rubatsiro kuzvipatara zvakazvimirira zvoga izvo zvinodhura zvakanyanya.